Otú nyefee Ndi ana-akpo si Nokia Lumia Iji ihe iPhone
Ọ bụrụ na ị nọwo na-agụsi Windows ekwentị supporter ruo ugbu a ma na-achọ ime a mgba ọkụ ka iOS n'elu ikpo okwu, ị ga-achọghị ịhapụ n'azụ afọ nke mebere data akụ echekwara na gị Windows smartphone. Ndị kasị mkpa akụkụ nke akụ gị ga-abụ ọtụtụ narị kọntaktị echekwara na akwụkwọ ndekọ.
Windows igwe, dị ka Nokia Lumia, na-adabere n'elu a irè Microsoft ID. A Microsoft ID bụ adreesị ozi-e na-eji na-ndabere gị mkpa onye data dịka kọntaktị, kalenda, na ngwaọrụ mmasị.
Ke ibuotikọ emi, anyị ga-ewebata abụọ ụzọ nyefee kọntaktị site na Windows na ekwentị iPhone.
Free Method: Nyefee Ndi ana-akpo site Outlook na MobileGo
Nyefee na Ndi ana-akpo iji Wondershare MobileTrans na Otu Click
Part 1. Free Method: Nyefee Ndi ana-akpo site Outlook na MobileGo
Ka mmekọrịta kọntaktị gị echekwara na Nokia Lumia ama na gị Outlook akaụntụ, ị ga-ịmepụta otu akaụntụ www.outlook.com. Ozugbo akaụntụ ọma kere na i synched kọntaktị echekwara na Nokia Lumia na ya, ị nwere ike ahụ na-akpakọrịta na akaụntụ gị na MS Outlook.
Ị ga-eso usoro nyere n'okpuru mezue usoro:
• Nzọụkwụ 01: mekọrịta kọntaktsị echekwara na Nokia Lumia smartphone gị www.outlook.com akaụntụ.
1. Gbanye gị Nokia Lumia smartphone, ma pịgharịa gaa na site na ịchọta ndị mmadụ ngwa si égwu ngalaba na n'ụlọ ihuenyo.
2. Ozugbo Ndị mmadụ na-eji ngwa ga-emepe, enweta Ntọala akara ngosi (icon nọchiri anya dị ka atọ horizontally kwekọọ ntụpọ) na ala-nri akuku nke ihuenyo.
3. Site mmapụta menu, enweta na tinye otu akaụntụ nhọrọ.
4. Ozugbo Tinye Ndi ana-akpo window emepe, enweta tinye otu akaụntụ nhọrọ.
5. Site meghere Tinye ihe akaụntụ window, pịa iji họrọ Outlook.com.
6. Na OUTLOOK.COM window, enweta connect na ala-ekpe akuku.
7. Mgbe ị na-ibugharị na Microsoft si ukara website, tinye ziri ezi nzere dịnụ ubi, na enweta na Banye bọtịnụ.
8. Chere ruo mgbe gị Nokia Lumia smartphone si kọntaktị na-kewapụrụ akaụntụ Microsoft.
• Nzọụkwụ 02: akpakọrịta ị Outlook ID na MS Office Outlook gị PC.
1. On gị PC, pịa Malite bọtịnụ. (Windows 7 na-eji na a ngosipụta.)
2. Site Malite menu na-egosi, pịa All omume wee pịa imeghe Microsoft Office 2013 akpa.
3. Pịa Outlook 2013 si dị omume.
Cheta na: MS Office 2013 arụnyere na Windows 7 na-eji na ebe a na ngosipụta. Ọ bụrụ na ị na-eji ihe ọ bụla dị iche iche version nke Windows ma ọ bụ MS Office, họrọ ihe kwesịrị ekwesị nhọrọ kwekọrọ na ya.
4. Ozugbo ngwa ga-emepe, mgbe kpaliri, gosi ịgbakwunye akaụntụ email na-MS Outlook.
5. Na meghere Tinye otu akaụntụ window, tinye ziri ezi nzere gị Outlook.com akaụntụ.
6. Chere maka MS Office iso na-akpakọrịta ị Outlook.com akaụntụ.
7. Na Add Akaụntụ nkwenye igbe, pịa imecha button na ala-nri akuku.
8. Mgbe gị na akaụntụ ọma metụtara, na-eche maka data gị Outlook.com akaụntụ ina synched na gị MS Office Outlook profaịlụ.
Mgbe ị ọma dechara niile n'elu tụlere usoro, ọ bụ ugbu a oge mbubata kọntaktị gị ọhụrụ gị iPhone. A pụrụ imezu nke iji a-atọ ndị ọzọ omume kọwara n'ụzọ zuru ezu na akụkụ nke abụọ nke a na nkuzi nyere n'okpuru:
Nzọụkwụ 3: Import Outlook Ndi ana-akpo Gị iPhone Na One Click
N'ihi na a simplified na mfe ngwọta mbubata kọntaktị site na gị MS Outlook profaịlụ gị iPhone, ị nwere ike ibudata otu nke kasị mma na ukwuu na-atụ aro atọ ọzọ na-ngwaọrụ aha ya bụ MobileGo site Wondershare. MobileGo bụ otu n'ime ọtụtụ mobile ịba uru ngwa ẹkenam site Wondershare, na e mepụtara na-eme ka ndụ gị mfe site na àjà ụfọdụ nifty atụmatụ na iTunes doo si. MobileGo for iOS Bụ ihe magburu onwe Companion maka Apple si software na-enyere gị jikwaa ọdịnaya na gị iOS ngwaọrụ na ala.
MobileGo for iOS Abịa na a Toolkit na-enyere gị ịrụ ụfọdụ ndị ọzọ na aga-eme. The Toolkit agụnye atụmatụ dị ka a na-edegharị media faịlụ site na iTunes gị PC, adịrị ọdịyo si a video faịlụ, na converting ndị dị media faịlụ ka iOS-dakọtara usoro. The Toolkit na-abịa na wuru na-'Ndi ana-akpo Manager' na-enye gị ka ndabere kọntaktị gị, chọta na-ewepụ oyiri kọntaktị site na gị akwụkwọ ndekọ, na mbubata / mbupụ kọntaktị ma ọ bụ site gị Outlook profaịlụ.
Mbubata kọntaktị site na gị Outlook akaụntụ gị iPhone iji Windershare MobileGo:
1. Download Wondershare MobileGo si n'elu njikọ na wụnye ya na gị PC.
2. Jikọọ gị iPhone gị PC na iji eriri USB.
3. Mgbe ejikọta, na-eche ruo MobileGo ịchọpụta ekwentị gị na-egosiputa ya na akara ngosi na ekpe ebi ndụ nke interface.
4. Ozugbo nke a mere, site n'aka ekpe ebi ndụ ya, pịa iji họrọ Ndi ana-akpo nhọrọ.
5. Ozugbo họrọ, si nri ebi ndụ nke interface, pịa Import button ọkọlọtọ toolbar ke n'elu.
6. Site egosipụta menu, pịa si Outlook 2003/2007/2007/2013.
7. Na Họrọ Profaịlụ popup igbe pịnye a chọrọ profaịlụ aha.
8. Chere maka MobileGo ka anabata usoro nke importing kọntaktị gị MS Office Outlook profaịlụ gị iPhone.
9. Pịa Bubata bọtịnụ na Import Ndi ana-akpo nkwenye igbe n'ihu na mbubata usoro.
10. Chere maka MobileGo Ibu Ibu na-egosipụta na niile dị na kọntaktị na Kpọtụrụ ndepụta gị iPhone.
Usoro nke-ebufe kọntaktị site na gị Nokia Lumia smartphone gị iPhone tụlere n'elu kwesịrị ka ewe gị oge ụfọdụ ma n'eziokwu a obere hassle. Ugbu a, anyị nwere ọzọ ụzọ nke nwere ike inyere ị nyefee kọntaktị site na Windows na ekwentị iPhone truely hassle-free na-azọpụta gị oge.
Part2: Nyefee Ndi ana-akpo iji Wondershare MobileTrans na Otu Click
Wondershare MobileTrans Enye ụzọ dị mfe iji nyere gị aka nyefee gị Windows na Kọntaktsị ekwentị ka iPhone ma ọ bụ Android nanị otu click. Ọ dị mkpa ka haa ebe a na ọ bụ nchebe iji na posses dịghị ize ndụ gị ma ọ bụ ngwaọrụ gị.
Ị nwere ike ibudata ma wụnye free ikpe version si download buttons n'okpuru.
• Nzọụkwụ 1: ndabere Ndi ana-akpo na Lumia gị OneDrive akaụntụ.
Na mmalite ihuenyo gị Lumia ekwentị, swipe we si n'elu na enweta All Settings ndabere. Banye na akaụntụ Microsoft gị wee họrọ kọntaktị na ndabere. Nọmalị ekwentị gị ga-akpaghị aka ndabere kọntaktị gị gị microsft akaụntụ.
• Nzọụkwụ 2: Open Wondershare Mobiletrans, họrọ Weghachi si ndabere mode na interface, wee họrọ OneDrive si nhọrọ.
• Nzọụkwụ 3: Sign gị OneDrive akaụntụ na ka usoro ihe omume ike iṅomi nkwado ndabere na mpaghara faịlụ. Usoro a pụrụ sekọnd ole na ole. Jikọọ gị iPhone na kọmputa, mgbe ahụ, usoro ihe omume ga-amata na ọ na-akpaghị aka.
• Nzọụkwụ 4: Họrọ Ndi ana-akpo na pịa Malite Nyefee. The kọntaktị ga-agafere nke iPhone na sekọnd ole na ole.
> Resource> iPhone> otú nyefee Ndi ana-akpo si Nokia Lumia Iji ihe iPhone